December 2020 - Page2of 34 - Khitalin Media
ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့အရည်အချင်းမရှိတဲ့ယောက်ျားကိုလက်မတွဲသင့်ပါဘူး။ အဆင်မပြေလို့ပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အဘိုးအရွယ်တွေကိုမောင်မခေါ်ချင်ပါနဲ့။ ဘယ်လောက်ချစ်ချစ်အိမ်ထောင်တစ်ခုသာယာအောင်မဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုလည်းမမက်မောပါနဲ့။ ချမ်းသာချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ငွေတွေနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုမရောင်းလိုက်ပါနဲ့။ ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန်ထက်မြက်တဲ့မိန်းမဖြစ်အောင်ကြိုးစားသင့်တာမိန်းမသားတွေရဲ့မာနပါ မိန်းမသားတစ်ယောက်လောက်မှအရည်အချင်းမရှိတဲ့ယောက်ျားကိုမမက်မောတာဟာငွေမက်လို့ဂုဏ်မက်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ မိန်းမသားတစ်ယောက်ရဲ့အရည်အချင်းတွေကျဆင်းစေလို့ပါ။ အရည်အချင်းမရှိသူကိုလက်တွဲပြီးဘဝဖြတ်သန်းမဲ့အစားတက်စွမ်းသမျှခွန်အားနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းနေ ကြည့် လိုက်ပါ…. အတိတ်ကကံကမျက်နှာသာမပေးဝဋ်ကြွေးဆိုရင်တော့ကျေအောင်ဆပ်ပြီးကျေသင့်ပြီထင်ရင်ရုန်းထွက်သင့်ပါတယ်။ အရည်အချင်းရှိတဲ့ယောက်ျားကိုစာနာတက်တဲ့ယောက်ျားကိုစဉ်းစား ရွေးချယ် သင့်တာမဟုတ်ပါ လား… မိန်းမသားတစ်ယောက်ဟာအရည်အချင်းရှိအောင်ကြိုးစားခဲ့ရတာမို့အရည်အချင်းရှိတဲ့ယောက်ျားကိုမက်မောတာအပြစ်မဟုတ်ဘူးလို့မြင်ပါတယ်။ Credit: အကြည်တော် လုလင် Unicode ခဈြပါတယျဆိုတဲ့ခံစားခကျြနဲ့အရညျအခငျြးမရှိတဲ့ယောကျြားကိုလကျမတှဲသငျ့ပါဘူး။ အဆငျမပွလေို့ပါဆိုတဲ့ခေါငျးစဉျနဲ့အဘိုးအရှယျတှကေိုမောငျမချေါခငျြပါနဲ့။ ဘယျလောကျခဈြခဈြအိမျထောငျတဈခုသာယာအောငျမဖနျတီးပေးနိုငျတဲ့ယောကျြားတဈယောကျကိုလညျးမမကျမောပါနဲ့။ ခမျြးသာခငျြတဲ့စိတျကွောငျ့ငှတှေနေဲ့ကိုယျ့ဘဝကိုမရောငျးလိုကျပါနဲ့။ ကိုယျ့ဒူးကိုယျခြှနျထကျမွကျတဲ့မိနျးမဖွဈအောငျကွိုးစားသငျ့တာမိနျးမသားတှရေဲ့မာနပါ မိနျးမသားတဈယောကျလောကျမှအရညျအခငျြးမရှိတဲ့ယောကျြားကိုမမကျမောတာဟာငှမေကျလို့ဂုဏျမကျလို့မဟုတျပါဘူး။ မိနျးမသားတဈယောကျရဲ့အရညျအခငျြးတှကေဆြငျးစလေို့ပါ။ အရညျအခငျြးမရှိသူကိုလကျတှဲပွီးဘဝဖွတျသနျးမဲ့အစားတကျစှမျးသမြှခှနျအားနဲ့တဈကိုယျတညျးနေ ကွညျ့ လိုကျပါ…. အတိတျကကံကမကျြနှာသာမပေးဝဋျကွှေးဆိုရငျတော့ကအြေောငျဆပျပွီးကသြေငျ့ပွီထငျရငျရုနျးထှကျသငျ့ပါတယျ။ အရညျအခငျြးရှိတဲ့ယောကျြားကိုစာနာတကျတဲ့ယောကျြားကိုစဉျးစား ရှေးခယျြ သငျ့တာမဟုတျပါ လား… မိနျးမသားတဈယောကျဟာအရညျအခငျြးရှိအောငျကွိုးစားခဲ့ရတာမို့အရညျအခငျြးရှိတဲ့ယောကျြားကိုမကျမောတာအပွဈမဟုတျဘူးလို့မွငျပါတယျ။ Credit: အကွညျတျော လုလငျ
မကျြနှာပျေါက အမာရှတျတှနေဲ့ အမညျးစကျတှရှေိလြှငျ ဂငျြးကို ဒီလိုအသုံးပွုပါ
မကျြနှာပျေါက အမာရှတျတှနေဲ့ အမညျးစကျတှရှေိလြှငျ ဂငျြးကို ဒီလိုအသုံးပွုပါ ဂငျြးက အစာအိမျအတှကျ အထူးကောငျးမှနျသလို တခွားကနျြးမာရေးအတှကျလညျး ဆေးတဈလကျ အနနေဲ့ အသုံးပွုလို့ ရပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အလှအပအတှကျလညျး အသုံးဝငျပါသေးတယျနျော.မကျြနှာပျေါက အမာရှတျတှနေဲ့ အမညျးစကျတှအေတှကျ ဂငျြးကိုအသုံးပွုနညျး (၁) ဂငျြးဟာ မကျြနှာပျေါကအာရှတျတှေ အညဈအကွေးတှကေို သနျ့စငျပေးနိုငျပါတယျ။ အမာရှတျရှိတဲ့နရောမှာ ဂငျြးကို ပါးပါးလှီးပွီး ကပျထားပေးပါ။ ဂငျြးခွောကျသှားတဲ့ထိ ထားပါ။ တဈနကေို့ တဈကွိမျလောကျ လုပျပေးပါ။ လအနညျးငယျဆို သိသာပါလိမျ့မယျ။ နညျးလမျး (၂) ဂငျြးကို တောကျတောကျစဉျး (သို့) အမှုနျ့ကွိတျထားတဲ့ ဂငျြးကိုယူပါ။ ပွီးရငျ သံပုယိုသီး (သို့) သံပုရာသီးကို အနညျးငယျ အရညျညှဈပါ။ ပြားရညျထညျ့ပါ။ သခြောမှပွေီးရငျ မကျြနှာပျေါမှာလိမျးပေးပါ။ မိနဈ ၃၀ လောကျထားပွီး ရဆေေးခပြါ။ … Read more
ရခြေိုးပွီးရငျ မှနျကွညျ့ကွညျ့ပါ သငျ့မကျြလုံးနီနရေငျ သတိထားပါ ရခြေိုးပွီးလြှငျမကျြစိနီခွငျးသညျ လဖွေတျမညျ့ရှပွေ့ေးလက်ခဏာတှငျပါဝငျသညျ။ အထူးသဖွငျ့မကျြစိနီခွငျးသညျဘယျခွမျး သို့မဟုတျ ညာခွမျးတဈဘကျဘကျတှငျဖွဈလရှေိ့သညျ။ ထိုအခွမျးတှငျပငျလဖွေတျသညျကိုတှရေ့သညျ။စာရေးသူ၏သုတသေန လဖွေတျမညျ့လက်ခဏာ(၉)ခကျြတှငျဤအခကျြသညျ နောကျဆုံးမှဖွဈသျောလညျး ထိပျဆုံးမှအရေးကွီးသညျ။သှေးတိုးရှိနသေူမြား၊သှေးတိုးရှိနသေညျကိုသတိမထားမိသူမြားသညျ ရခြေိုးပွီးလြှငျ သတိထားကွညျ့ကွပါ။ သှေးတိုးကွောငျ့ဦးနှောကျသှေးကွောမပွတျမီဤလက်ခဏာကအရငျပွပါသညျ။ လဖွေတျခွငျးကိုကွိုတငျကာကှယျပါ။ဖွဈမှကုသလြှငျ မညျသူမြှ ပကတိပွနျလညျကောငျးမလာပါ။ ဤစာဖတျသူမြားအားလုံးကနျြးမာခမျြးသာကွပါစလေို့ရှခေဈြသူမှဆုတောငျးမတ်ေတာပို့သပေးပါတယျ။ မြှဝပေေးခွငျးဟာလညျးမတ်ေတာတဈမြိုးပဲမို့ မြှဝပေေးပါနျော… Zawgyi ရေချိုးပြီးရင် မှန်ကြည့်ကြည့်ပါ သင့်မျက်လုံးနီနေရင် သတိထားပါ ရေချိုးပြီးလျှင်မျက်စိနီခြင်းသည် လေဖြတ်မည့်ရှေ့ပြေးလက္ခဏာတွင်ပါဝင်သည်။ အထူးသဖြင့်မျက်စိနီခြင်းသည်ဘယ်ခြမ်း သို့မဟုတ် ညာခြမ်းတစ်ဘက်ဘက်တွင်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ထိုအခြမ်းတွင်ပင်လေဖြတ်သည်ကိုတွေ့ရသည်။စာရေးသူ၏သုတေသန လေဖြတ်မည့်လက္ခဏာ(၉)ချက်တွင်ဤအချက်သည် နောက်ဆုံးမှဖြစ်သော်လည်း ထိပ်ဆုံးမှအရေးကြီးသည်။သွေးတိုးရှိနေသူများ၊သွေးတိုးရှိနေသည်ကိုသတိမထားမိသူများသည် ရေချိုးပြီးလျှင် သတိထားကြည့်ကြပါ။ သွေးတိုးကြောင့်ဦးနှောက်သွေးကြောမပြတ်မီဤလက္ခဏာကအရင်ပြပါသည်။ လေဖြတ်ခြင်းကိုကြိုတင်ကာကွယ်ပါ။ဖြစ်မှကုသလျှင် မည်သူမျှ ပကတိပြန်လည်ကောင်းမလာပါ။ ဤစာဖတ်သူများအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ရွှေချစ်သူမှဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးပါတယ်။ မျှဝေပေးခြင်းဟာလည်းမေတ္တာတစ်မျိုးပဲမို့ မျှဝေပေးပါနော်…
ခွဲမရအောင်ချစ်မိကြတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ အချက် ( ၈ )ချက်
အချစ်ဆိုတာ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်အောင်မြင်တဲ့ ချစ်သူစုံတွဲဖြစ်ဖို့အတွက် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နီးစပ်မှုရှိနေဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှာ ချစ်သူနှစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာတွေလို ခွဲမရအောင် နီးစပ်သွားတာမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ကြားလေသွေးရင်တောင် ဝေးတယ်လို့ ထင်ပြီး အချင်းချင်း ကော်နဲ့ကပ်ထားသလို ခွဲမရအောင်ချစ်မိကြတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ သက်ရောက်မှုတွေကို စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၁။ “ငါ” ဆိုတာက “ငါတို့” ဖြစ်လာတယ်။ သင့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်တွေတွေက ပွဲလမ်းတစ်ခုခုရှိရင် တစ်ယောက်တည်းဖိတ်လို့မရတော့ပါဘူး။ ဘာလို့ဆို အမြဲတမ်း သင့်တို့စုံတွဲက အတူလာမှာမို့လို့ပါ။ ဘယ်သွားသွား ဘယ်လာလာ နှစ်ယောက်တွဲဖြစ်နေတာကြောင့် သင့်တို့ကို တစ်ယောက်တည်း မြင်ကြတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ၂။ သူငယ်ချင်းတွေ တဖြည်းဖြည်းနည်းလာတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ပြောကြဆိုကြ၊ တစ်ယောက်လိုအပ်နေချိန်မှာ တစ်ယောက်ရှိနေတတ်ပေမယ့် … Read more
ချစ်သူရှိတဲ့ သူတိုင်း အလွတ်ကျက်ထားသင့်တဲ့ စကား ( ၈ ) ခွန်း အချစ်ရေးရေရှည်တည်မြဲဖို့ဆိုရင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ထိန်းသိမ်းရမယ့်အပိုင်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။ သင်က အမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဒီအချစ်ရေးကို အဆုံးထိခိုင်မြဲချင်တဲ့သူဆိုရင် သင့်ချစ်သူကောင်မလေးအတွက် သင့်ဘက်က လုပ်ဆောင်ပေးရမယ့်အရာလေးတွေ ရှိပါတယ်။လူတိုင်းဟာ ချီးမွမ်းပြောဆိုတာ ခံချင်တတ်ကြတာချည်းပါပဲ။ ပြီးတော့ သူဟာ သင့်ဘဝမှာ မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုတာကိုလည်း သင်ပြောတာမျိုး ခံချင်မှာပါ။ အဲ့ဒီအချက်ကလေးတွေပေါ်မူတည်ပြီး သင့်ချစ်သူကောင်မလေးကို နေ့တိုင်းပြောဆိုပေးရမယ့် အရာလေးတွေ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ ကိုယ်မင်းကိုချစ်တယ်ဒီစကားကရိုးလွန်းတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် သင်တို့နှစ်ဦးအတွက် တကယ်ကို လိုအပ်ပါတယ်။ သင်အလုပ်မသွားခင်၊ ဒါမှမဟုတ် မနက်ပိုင်း ချစ်သူဆီဖုန်းဆက်တဲ့အခါ ၊ ညဘက်အိပ်ခါနီးဖုန်းဆက်တဲ့အခါတွေမှာ ဖုန်းချခါနီးတိုင်း သင့်ကောင်မလေးကို ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလေး မပျက်မကွက်ပြောပါ။ ၂။ မင်းက အရမ်းကို လှပတဲ့ မိန်းကလေးပါတစ်ခါတစ်လေမှာ … Read more
ခပေါင်းတံတားမှာ ရထားထက်မှ ပြုတ်ကျဆုံးပါးခဲ့ရသူ မင်းသားပြေငြိမ်း . . .အဖြစ်မှန်(ရုပ်သံ) တောင်ငူ ခပေါင်းတံတားနဲ့ မင်းသားပြေငြိမ်း အနှစ်သုံးဆယ် ညက တောင်ငူကပြန်လာတာ နေပြည်တော်ကို၈နာရီထိုးမှရောက်တယ်။ ပြေငြိမ်း ကွယ်လွန်တဲ့နှစ်၃၀ပြည့်အမှတ်တရပို့စ်တက်လာလို့ သတိတရရေးမယ်စိတ်ကူးပေမယ့် ခရီးကပန်းလို့မရေးနိုင်ဘူး။ မနေ့က သားငယ်ပြည့်ဖြိုးဟန်အသက်၃၀ပြည့်ပါတယ်။ မန္တလေးကပြန်လာပြီးတောင်ငူမြို့ပွတ်စုကျောင်းမှာရဟန်းခံပါတယ်။12-7-1990နေ့ကတောင်ငူဆေးရုံကြီးမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ဆေးရုံအုပ်ကြီးDrဦးခင်ဖေလင်းနဲ့ဒေါ်တင့်တင့်နွယ်တို့ကခွဲစိပ်မွေးဖွား‌ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီညမှာပဲ ရုပ်ရှင်မင်းသားပြေငြိမ်းကလည်း5 Upရထားနဲ့မန္တလေးကိုသွားပါတယ်။အဲဒီညက5upရထားဟာထွက်သွားပြီးကာမှ စက်ချို့ယွင်းလို့ဘူတာထဲပြန်ဝင်ပြီးစက်ပြင်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ နောက်တနေ့မှာကျနော်EMOတာဝန်ကျပါတယ်။10amမှာခပေါင်းချောင်းထဲကအလောင်းတခုတွေ့လို့ဘူတာကကုန်တင်တဲ့တွန်းလှည်းနဲ့ဆေးရုံကိုသယ်လာပါတယ်။အရပ်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းလူငယ်တဦးဖြစ်ပြီးမျက်နှာကတခြမ်းစီကွဲပြီးခေါင်းထိပ်ပိုင်းပွင့်ထွက်နေပါတယ်။ဂျင်းဘောင်းဘီရှည်တီရှပ်ဝတ်ဆင်ထားပြီးဘယ်သူဘယ်ဝါအသိအမှတ်ပြုရန်ခက်နေပါတယ်။ ထိုနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစပြီး တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မေးမြန်းသူများတဲ့အတွက်တချိန်လုံးမအားလပ်အောင်ဖြေနေရပါတယ်။ရုပ်ရှင်မင်းသားပြေငြိမ်းပျောက်ဆုံးနေ၍မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။‌သူနဲ့လာတဲ့အဖော်က မန္တလေးရောက်မှသူပျောက်တာကိုသိတာပါ။ညက ရှေ့တွဲမှာပါလာတဲ့တင့်တင့်ထွန်းတို့ဆီသွားမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ တောင်ငူအဝင်ကခပေါင်းတံတားမှာ‌ရေထဲပြုတ်ကျတာပါမီးရထားသံဘောင်တံတားတွေဟာနိမ့်ပါတယ်။တွဲခေါင်မိုးပေါ်မှာထိုင်စီးရင်မလွတ်ပါဘူး။တံတားရောက်ရင်ဝပ်နေမှလွတ်ပါတယ်။မင်းသားကတွဲခေါင်မိုး‌ပေါ်တက်ထိုင်ပုံရပါတယ်တံတားရှိမှန်မသိတော့မရှောင်နိုင်ပဲသံဘောင်နဲ့တိုက်ပြီးချောင်းထဲကျ၊ဗေဒါဒိုက်တွေပေါ်ကျလို့ရေထဲမမြောတာပါ။ မြောသွားရင်ရှာတွေ့ဖို့အတော်ခက်ပါမယ်။မနက်လင်းမှတံတားရဲကင်းကအလောင်းကိုတွေ့ပြီးဆေးရုံကိုပို့ပါတယ်။မိသားစုကလည်းပျောက်နေလို့စုံစမ်း၊ဒီမှာလည်းအမျိုးအမည်မခွဲခြားနိုင်တဲ့အလောင်းကရောက်နေတော့ ၊အသေအချာမပြောနိုင်။၃နာရီလောက်မှာ ဖခင်ဦးမောင်မောင်မြင့်ကဖုန်းဆက်ပြီးသူ့ရဲထင်ရှားတဲ့အမှတ်လက္ခဏာတွေပြောပြတော့ကိုက်ညီနေပါတယ်။ ပြေငြမ်းရဲ့ဘကြီးDrဦးသာမိုးကိုယ်တိုင်လိုက်လာပါတယ်။ဆရာကြီးဦးခင်ဖေလင်းနဲ့အတူတူရင်ခွဲစစ်ဆေးပါတယ်။ပြေငြိမ်းသတင်းကမြို့ထဲမှာချက်ချင်းပျံ့သွားပြီးရင်ခွဲရုံဝန်းကျင်မှာလူအများကြီး၊အမျိုးသမီးထုကပိုများ၏။မိုးကလည်းရွာလိုက်တာ၎လက်မ။ ည၈နာရီခန့်မှာDrဦးသာမိုး(သမိုင်းမသန်စွမ်းဆေးရုံအုပ်ကြီး)ရောက်လာပါတယ်။ရင်ခွဲရုံတံခါးဖွင့်ပြလိုက်တာနဲ့ ပြေငြိမ်းပဲလိုေ့ပြောပါတာ်။အရပ်ကရှည်တော့ ကျောက်စားပွဲဘောင်ပေါ်အထိရောက်နေတယ်။ညတွင်းချင်းခေါင်းတခုလုပ်ပြီးရန်ကုန်ကိုသယ်သွားပါတယ်။ မနက်၎နာရီမှာကို Myat Khineရောက်လာပြီးသတင်းယူတော့မင်းသားအလောင်းက လမ်းတဝက်ရောက်နေပြီ။ကျနော့ကိုအင်တာဗျူးပြီး အနုပညာကြေးမုံမဂ္ဂဇင်းမှာထည့်ပါတယ်။အနယ်နယ်မှာ ပြေငြိမ်းကားတွေပြန်ပြပြီး ဗွီဒီယိုရုံတွေကိုသူလုပ်ကျွေးသွားပါသေးတယ်။ကညွတ်ကွင်းမိတ်ဆွေတဦးဆို ကြိုးဖုန်းတလုံးဝယ်နိုင်တဲ့ပမာဏ၂ရက်အတွင်းရပါသတဲ့။ သင်္ဂြုလ်ပြီးတပတ်မှာ Maung Maung myintthukhuma ရောက်လာပြီးရဲစခန်းကသိမ်းဆည်းထားတဲ့ဆွဲကြိုး၊ဘိနပ်နဲ့ပစ္စည်းတွေလာထုတ်ယူပါတယ်။ ပြေငြိမ်းအမှတ်တရvcdထဲမှာကျနော်တို့ပုံတွေပါတယ်ဒါကတော့ကျနော်ကြုံခဲ့ရတဲ့ အမှတ်တရတွေပါပဲ။အနှစ်၃၀တောင်ကြာခဲ့ပြီပဲ။ Credit to … Read more
၂၀၂၁-ခုနှစ်အတွက်စနေသားသမီးများ၏ (၁)နှစ်စာကံကြမ္မာဟောစာတမ်းနှင့်ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ စနေသားသမီးများ အလုပ်ကိစ္စများမှာ စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ရခက်မှု မတင်မကျများစွာ ကြုံတွေ့ရတတ်သည် ။ စိတ်မောလူပန်းပြီး လက်လွတ်ချင်စိတ်များပေါ်မည် ။ စိတ်မညစ်ပါနဲ့။ အားအင်ထည့်ပြီး ဦးနှောက်ကို သေချာအသုံးချပါ။အောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ယခုကာလမှာ အလုပ်အကိုင်များစတင်ဖို့ ကောင်းမွန်သောအချိန်ပါ ။ ဒါပေမဲ့အရာရာ စေ့စပ် သေချာမှုလိုအပ်ပါတယ် ။ ငွေကြေးကိစ္စများမှာ လုပ်သာလုပ်နေတယ် လက်ထဲငွေမရှိပဲ ၊ ငွေကြောင့် အမြဲပူပင်နေရတတ်ပြီး ၊ ကတိမတည်သူကိုငွေချေးမိပြီး ၊ ငွေကြေးဆုံးရှုံး ရတတ်ပါတယ် ။ မိမိသူများဆီကငွကြေးချေးယူမိပါက ၊ ကတိပျက်မိပြီး|အခင်အမင်ပျက်တတ်ပါတယ် ။ ငွေကြေးကျပျောက်တတ်ပါတယ်။ ကားနှင့်ပတ်သက်တာ ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ အလုပ်မှာမထင်မှတ်ထားပဲ ပေါ့ပေါ့ဆဆကိစ္စများကြောင့် ပြဿနာ ၊ အမှုအခင်းတွေ့ရတတ်ပါတယ် ။ စနေသားသမီးများ နေရာအသစ်များသွားလာရပြီး ၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းသင်းများလာမဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ပါ ။ … Read more
ဘယ်အသက်အရွယ် ရောက်ရောက် လူငယ်တစ်ယောက်လို နုပျိုလန်းဆန်းနေစေဖို့ ….
နုပျိုခြင်းကို မလိုချင်တဲ့သူဆိုတာ မရှိသလောက်ကို ရှားပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေဆိုရင်လည်း ဘယ်အရွယ်ရောက်ရောက် လှနေမယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်တင် နုပျိုတယ်ဆိုတာက ခက်တယ်လို့ ဆိုရပေမယ့် သိပ်တော့လည်း မခက်ပါဘူး။ စိတ်ပျိုရင် ကိုယ်နုတယ်ဆိုသလို ကိုယ့်ဘက်ကနေ နုပျိုအောင်လို့ လူငယ်အချိန်တည်းက လိုက်နာနိုင်ရင် အကောင်းဆုံး ဖြစ်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကို လိုက်နာမယ်ဆိုရင်တော့ အသက်တွေ ကြီးရင်တောင်မှ ကိုယ်က အမြဲ နုပျိုနေတဲ့သူအဖြစ် ရှိနေမှာပါ။ စိတ်ပျော်အောင် နေပါ စိတ်ပျိုရင် ကိုယ်နုတယ်ဆိုတာ တကယ်ကို မှန်တဲ့ စကားပါ။ ကိုယ်က စိတ်ချမ်းသာအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး နေထိုင်မယ်၊ ဘဝကို အဆင်ပြေအောင် ကြိုးစားနေနိုင်တယ်ဆိုရင် ပျော်ရွှင်ဖို့ကို အလေးပေးသင့်ပါတယ်။ ပျော်ရတဲ့ အချိန်တွေမှာ ပျော်မယ်။ စိတ်ညစ်စရာတွေ တွေးပြီး စိတ်ညစ်နေမယ့်အစား … Read more